Car Front windshield Parasol Suppliers & Factory - China Car n'ihu windshield Parasol Manufacturers
Car Front Windshield Parasol na Kwụ Ọtọ 5024
High shading n'ihu windshaeld sunshade Auto parasol anyanwụ nchedo na mkpuchi mkpuchi na windo emebi 5024SBT
Ezigbo mmetụta nchedo anwụ: akwa oyi akwa nke akwa nche anwụ bụ titanium ọlaọcha gluu mkpuchi (HOUSTIN TIO2), nke nwere nnukwu ntụpọ Refractive yana ọnụọgụ mgbochi UV karịa 99%. Enwekwara ihe mgbochi mgbochi mejupụtara, akwa mkpuchi mkpuchi dị elu, na akwa mkpuchi na-ekpuchi ọkụ, nke nwere ike ịbelata Belata ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụgbọ ala karịa 20-30.
Car Front Windshield Parasol na Bendable Aka Aka 5036
Car n'ihu sunshade nche anwụ-ụdị sunshade n'ihu sunscreen na okpomọkụ mkpuchi sunshade ahụ nwere ike kpudo elu shading 5036SBT
Ezigbo ihe mkpuchi: akwa oyi akwa nke ákwà nche anwụ bụ titanium ọlaọcha gluu mkpuchi (HOUSTIN TIO2), nke nwere ntụgharị ntụgharị dị elu na ọnụego UV nke ihe karịrị 99%. Enwekwara ihe mgbochi mgbochi mejupụtara, akwa mkpuchi mkpuchi dị elu, na akwa mkpuchi na-ekpuchi ọkụ, nke nwere ike ịbelata Belata ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụgbọ ala karịa 20-30.
Car Front Windshield Parasol na Nnennen Aka Titanium Silver Glue 5024A
Igwe na-eche ihu n'ihu windbreeld, nchebe anyanwụ na mkpuchi ọkụ na windo windo 5024ASBT
Ezigbo mmetụta nchedo anyanwụ: akwa oyi akwa kachasị elu nke akwa nche anwụ bụ ihe mkpuchi ọlaọcha titanium (HOUSTIN TIO2), nke nwere ntụgharị ntụgharị dị elu yana ọnụọgụ ọkụ nke UV karịrị 99%. Enwekwara akwa mgbochi mejupụtara, akwa nkpuchi na-ekpuchi ọkụ na akwa mkpuchi na-ekpuchi ọkụ, nke nwere ike belata ọnọdụ okpomọkụ na ụgbọ ala karịa karịa ogo 20-30.
Ezi shading utịp: nche anwụ ákwà bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ụgbọ ala n'ihu windshield, mbenata ìhè transmittance.